Shiinaha taaban kartoo Taper jeestay in lathe mashiinka-saareyaasha, warshad - Dongguan Guancheng qirayso Hardware Co., Ltd.
Hoyga > Ka shaqeynta Lathe Ka shaqeynta Lathe > Taper u rogida mashiinka lathe
3 cilladood oo ah lathe caadi ah by gear iyo drive caadiga ah fur lowska. Sababtoo ah waxaa jira farqi u dhexeeya labada lamaane ee dhaqdhaqaaqa, oo ay weheliso hawlgalka gacanta ma aha mid sax ah, markaa saxsanaanta ku celcelintu way hooseysaa. Qiyaasta lathe guud waxay u baahan tahay in la joojiyo cabirka gacanta ka dib, qaladka cabirku waa weyn yahay, iyo waxtar yar. Ku habboon dufcad yar, shuruudaha saxda ah ma ahan kuwo sarreeya, qaybo dayactir ah. Maalgashiga lathe CNC wuu ka hooseeyaa kan lathe CNC, laakiin wuxuu ubaahan yahay xirfado hawlgal oo sare oo shaqaalaha ah, sidaa darteed heerka mushaharku wuu sarreeyaa. Qiyaasta duugga ah iyo wax soosaarka shaqaale heer hoose ah ayaa ku siin kara madax xanuun.
Calaamadaha kulul: Taper beddelaya mashiinka lathe, Shiinaha, Customized, saarayaasha, Warshad